किन आउछ आँखाको वरिपरी यस्तो दाग ? यसरी गर्न सकिन्छ उपचार ! - ramechhapkhabar.com
किन आउछ आँखाको वरिपरी यस्तो दाग ? यसरी गर्न सकिन्छ उपचार !
जब शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न लाग्छ, तब त्यसको असर अनुहारमा देखिन थाल्छ । शरीरमा कोलेस्ट्रोल जम्मा हुँदा आँखाको वरिपरी सेतो सेतो दाग देखिन थाल्छ ।आँखाको आसपास कोलेस्ट्रोल जम्मा हुने समस्यालाई डायस्लिपिडेमिया पनि भनिन्छ ।
जुन एलडिएल कोलेस्ट्रोल बढेका कारण हुने गर्दछ। जुन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हा’निकारक हुन्छ । आँखाको वरीपरि जम्मा भएको कोलेस्ट्रोलले अनुहारको सुन्दरता बढाउने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले केही घरेलु उपायको प्रयोगबाट आँखामा जम्मा भएको कोलेस्ट्रोल कम गर्न सक्नुहुनेछ ।
आँखाको आसपास जम्मा भएको कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्नका लागि लसुन कुनै औषधिभन्दा कम हुँदैन् । लसुनको पेस्ट बनाएर आँखाको मुनी करिब १५ मिनेटसम्म लगाउनुहोस् । लगातार २ दिनसम्म यसो गर्दा तपाईले केही सुधार पाउनुहुनेछ। यदी चाहनुहुन्छ भने लसुन काँचो वा तरकारीमा राखेर पनि खान सक्नुहुनेछ ।
मेथि : मेथिमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्ने गुण हुने गर्दछ। यसको प्रयोग गर्नका लागि मेथिलाई राति भिजाएर राख्नुहोस्। त्यसपछि बिहान उठेर त्यसको पानी पिउनुहोस्।
खाली पेटमा मेथिको पानी पिउँदा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुने गर्दछ। सक्नुहुन्छ भने मेथिको पेस्ट बनाएर पनि आँखाको मुनी लगाउन सक्नुहुनेछ।
केराको बोक्रो : केरामा एन्टी अक्सीडेट्स र एन्जाइम हुने गर्दछ । जो कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गर्नमा निकै सहयोगी मानिन्छ। केराको बोक्राले आँखाको मुनी मसाज गरेर त्यसलाई केही बेर त्यत्तिकै छोडिदिनुहोस् । केही बेरमा त्यसलाई सफा पानीले धुनुहोस् । यसो गर्दा यस स’मस्याबाट राहत मिल्ने गर्दछ ।
दूध : दूध पिउनु स्वास्थ्य र छालाका लागि निकै फाइदाजनक हुने गर्दछ। हरेक दिन १ गिलास दूध पिउँदा अनुहारका दाग धब्बा हटेर जान्छन्।
दही : दहीमा ल्याक्टिड एसिड